नयाँ दिल्ली-नेपाल सरकारले १ सय रुपैयाँ भन्दा माथिको भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसको अर्थ अब नेपालमा १ सय भन्दा माथिका भारतीय नोट चल्दैन । यो प्रतिबन्ध पूर्व नेपालमा सबै किसिमका भारतीय नोट चलन चल्तीमा थियो ।
आखिर नेपालले अचानक यो फैसला किन लियो ?
हालै मात्र नेपालको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय अनुसार अब नेपालमा २००, ५०० र २ हजारका भारतीय नोट अवैध हुनेछ ।
अचम्मको कुरा यो छ कि नेपालले यसको कुनै कारण बताएको छैन । नेपालकोतर्फबाट जुन आधिकारिक सूचना जारी गरिएको छ त्यसमा पनि कुनै कारण उल्लेख गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा जिज्ञासा उठ्न सक्छ कि अचानक नेपालले के जरुरी कारणले यस्तो निर्णय लियो त ?
नेपालका वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेका अनुसार पनि यो फैसला किन लिइयो भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
उनी भन्छन्,“यसको असर जनतामा पर्ने स्पष्ट छ । यसले विशेषगरी सीमा क्षेत्रमा भारतीय व्यापारीलाई असर पर्न सक्छ । मलाई लाग्दैनकि यसले भारतलाई कुनै नोक्सानी हुनेछ । यसले दुवै देशमा व्यापार गर्नेहरुका लागि समस्या हुन सक्छ ।”
फैसला प्रभावित होला त ?
नेपाल सरकारको यो फैसला कक्तिको व्यवहारिक होला ? के यो फैसलापछि मानिसले १०० भन्दा माथिको नोटको कारोबार बन्द गर्लान् त ? यो प्रश्नको जवाफमा घिमिरे भन्छन्,“यो प्रश्न वास्तवमै महत्वपूर्ण रहेको छ कि सरकारको फैसला प्रभावितट होला त ? यसले नोट नलिने र दिने दुवैलाई समस्या हुनेछ ।”
यद्यपि ठूला नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको घिमिरे बताउछन् । उनी भन्छन्,“१९९९ मा जब भारतको यात्री विमान आतंकवादीले हाइज्याक गरेपछि उक्त समयमा भारत सरकारको अनुरोधमा नेपालले ५०० दरका भारतीय नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतले नोटबन्दी गरेको समयमा नेपालमा पनि ५०० तथा १००० का पुराना भारतीय नोट रहेको थियो । अहिलेसम्म पनि यी पुराना नोटको कुनै समाधान निक्लिएको छैन । स्पष्ट छ कि नोटबन्दीको फैसलाबाट नेपाललाई नोक्सानी भएको थियो । तर हाल नेपालले जुन फैसला लिएको छ यसको कुनै पनि असर परेको छैन ।”
नोटबन्दीका कारण नेपाल र भुटानलाई ठूलै नोक्सानी भएको थियो । भारतको अर्थ मन्त्रालयले दुवै देशमा रहेको पुरानो नोटको विषयमा कुनै ठोस कदम उठाएको छैन ।
नेपालले हाल जुन फैसला लियो यसको पहिलेदेखिनै आशंका भएको बताइदै आएको छ । नेपाल र भुटानसँग भारतको कुनै पनि औपचारिक सम्झौता भएको छैन, जसका माध्यमबाट नेपालमा भारतीय मुद्राको लेनदेन वैध होस् ।